Weerar ka dhan ah Soomaalida oo ka dhacay Turkiga | KEYDMEDIA ONLINE
Weerar ka dhan ah Soomaalida oo ka dhacay Turkiga
Weerar u muuqda inuu yahay falal isir naceyb ah ayaa ka billowday waddanka Turkiga, kaddib markii la weeraray Maqaayaddo ay Soomaali leedahay oo ku taal bartamaha magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga.
ANKARA, Turkey - Dhowr meheradood oo ay Soomaali leedahay ayaa lagu weeraray magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga sababo la xiriira cunsuriyad.
Sanadihii udambeeyay ayey Soomaalidu aad ugu sii badaneysay magaalooyinka waa weyn ee Turkiga, laakiin dhacdadaan ayaa noqoneysa midii ugu horeysay oo ka dhacda dalka Turkiga.
Weerar salka ku haya isir naceyb ayaa ka dhacay xaafadda Kızılay ee Ankara, Weerarkaan ayaa imaanaya kadib markii toddobaadkii hore wargeyska 'Daily Sözcü' ee kasoo baxa waddanka Turkiga uu daabacay warbixin cinwaankeedu ahaa (Bartamaha Ankara waxay isku beddeshay Soomaaliya labaad!).
Shan maalmood kadib Warbixinta Wargeysa, maalintii shalay ayaa Turki waxey weerar ku qaaday maqaayaddood oo Soomaalin leedahay, waxaana halkaas lagu burburiyay darishadaha mid kamid ah maqaayadaha.
Suxufiga caanka ee lagu magacaabo Firat ayaa bartiisa Twitter -ka ku soo qoray Kaddib cinwaankii wargeyska Sözcü, Soomaalidu waxay bartamaha Ankara u rogeen dalkooda: Goobahoodii shaqo ayaa la weeraray, ciwaanka mas'uuliyad darrada ah ee aad ku daabacday wargeyskiina ayaa horseeday tan. Dukaamo iyo makhaayado badan ayaa la weeraray.
Bogga Twitter ee Keydmedia English ka daawo Muuqaalka [VIDEO]
Tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 2011 oo lagu tilmaamo billowgii xiriirka waddamada Soomaaliya iyo Turkiga ayaa waxaa soo kordhayay xiriirka iyo is dhex galka labada shacab, iyadoo Soomaali badan ay u suurto gashay in ay dagaan, qaarna wax ka bartaan, qaar kalena halkaas loo geeyay tababar la xiriira dhanka ciidanka ayaa haddana waxaa billowday weerarro ka dhan ah Soomaalida.